Notice: Undefined index: smcat in /var/www/html/baganmart.com/includes/common.php on line 8
Myanmar ecommerce platform for business networking in constructions, industrial and electrical sectors
Electrical Wires လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုး
Low Voltage Electric Wire Cable
Electronic Excellence Cable
Myan Lann Electric Wire & Cable
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 100554 view counts
လျှပ်စစ် ဝိုင်ယာကြိုး - Cable & Wire
အနညျးဆုံး အရအေတှကျ : 1 Yard(s)
Brand : RR KABEL
Model : Superex-FR (IS 694)
လုပျငနျးအမညျ : CLASSIC Wire & Cables Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 09-5155768
Applications : ဝိုင်ယာကြိုးအတွင်းပိုင်တွင် ပြွန်နှင့် fix ဖြစ်အောင်တပ်ဆင်ထားပါသည်။
Insulation : အကောင်းဆုံး formula ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အပူဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ PVC insulator ကိုလည်း အသုံးပြုထားပါသည်။ အိမ်ခြံမြေကို ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
Insulation Conformity : IS 5831 Type A FR.
ထောက်ခံချက် : အမှတ်အသား ၆၉၄၊ C1 အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ FIA / TAC က အတည်ပြုထားပါသည်။
Marking : ကြိုးပေါ်မှာ SUPEREX FR ဟု ပုံနှိပ်ထားပါသည်။
Colours : အနီရောင်, အဝါရောင်, အပြာရောင်, အနက်ရောင်, အစိမ်းရောင်, အညိုရောင်။
Many thin strands of Electrolytic Copper are fine - drawn simultaneously for uniformity of Resistance, Dimension, and Flexibility. The drawn strands are twisted in high precision machines which imparts circularity to the conductor.
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးဖြစ်လာအောင် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သွားမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ကတိပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းကို ရေရှည်တည်မြဲစေရန်နှင့် အကောင်းဆုံးပုံဖော်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်လာတာနဲ့ အမျှ စိန်ခေါ်မှု အသစ်တွေကို ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေအသွေးပြည့်မှီတဲ့ ထုတ်လုပ်မှုတွေကို ဖန်တီးထုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စားသုံးသူများ၊ ဖောက်သည်များနှင့် သက်ဆိုင်သောသူများ၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်တဲ့ ဗဟိုချက်၊ သူတို့နေထိုင်တဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို သူတို့နဲ့အတူ ရေရှည်ခိုင်မြဲစွာလက်တွဲနိုင်ရန် တည်ထောင်ဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။
အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီးကြိုး - Cable
ဝိုင်ယာကြိုး - wire
၀ယျယူလိုသညျ့ အရအေတှကျ Yard(s)
For လျှပ်စစ် ဝိုင်ယာကြိုး - Cable & Wire
Approximate Quantity Needed Yard(s)
May I get the quotation for "လျှပ်စစ် ဝိုင်ယာကြိုး - Cable & Wire" ?